Myanmar Sports Villages - 128/135 -
မာတစ်ဟာ မော်ရင်ဟိုနဲ့ ပူးပေါင်းမယ်ဆိုတာ ရယ်စရာလို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
ဆားဘီးယား အသင်းခေါင်းဆောင် ကွင်းလယ်လူ နီမန်ဂျာမာတစ်ဟာ နည်းပြဆိုးလ်ရှားလက်ထက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတွင် ယခုနှစ်ရာသီအတွင်း ပွဲထွက်ခွင့်များလည်း ပျောက်ဆုံးနေခဲသလို အသက် လက်ရှိအချိန်တွင် ဒဏ်ရာရရှိနေပြီး မည်သည့်ဒဏ်ရာ ရရှိထားသည်ကိုတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်မှ တိတိကျကျ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ မာတစ်ဟာ ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် မန်ချကစတာ ယူနိုက်တက်အတွက် ၅ပွဲခန့်သာ ကစားထားပါတယ်။ ပရီးမီးယးလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် ၂ ပွဲသာ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိထားပြီး လူစားဝင် ကစားသမားအဖြစ် ၁ ပွဲသာ ရရှိထားသလို ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲတွင် ၂ ပွဲထိ ပွဲကစားခွင့် ရရှိထားပါတယ်။ လက်ရှိ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း၏ ကွင်းလယ်တွင် လူငယ်ကြယ်ပွင့် တိုမီနေး၊ ဖရက် တို့ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိနေသလို အတွဲအဖက်မိမိ ကစားနေကြပါတယ်။ ပြင်သစ်သားကွင်းလယ်လူ ပေါလ်ပေါ့ဘာ ပြန်လည်ပါဝင်လာပါက မာတစ်အတွက်...
စာချုပ်သစ်ကြောင့် လုပ်ခလစာ ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်လာတဲ့ မော်ရင်ဟို
တော်တင်ဟမ်အသင်းဟာ အာဂျင်တီးနားသား နည်းပြ ပိုချက်တီနိုအား အံအားသင့်စရာကောင်းအောင် ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက် နည်းပြလောကနဲ့ ၁၁ လကြာ ဝေးကွာနေတဲ့ ပေါ်တူဂီသား ဟိုဆေးမော်ရင်ညိုအား ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ပေါ်တူဂီသား နည်းပြဟာ မြောက်လန်ဒန်ကလပ် တော်တင်ဟမ်အသင်းနဲ့ ၃ နှစ်ခွစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ မော်ရင်ညိုဟာ တော့တင်ဟမ်အသင်းနဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် လုပ်ခလစာ အများဆုံး နည်းပြ စာရင်းတွင် ဒုတိယနေရာမှ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Daily Mail သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်ရ ဟိုဆေးမော်ရင်ညို၏ လုပ်ခလစာဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းတွင် ရရှိခဲ့သော လုပ်ခလစာအတိုင်း တော့တင်ဟမ်အသင်းဘက်မှ ပေးချေမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မော်ရင်ညိုဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းတွင် တစ်နှစ်လုပ်ခ ပေါင် ၁၅ သန်းအထိ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တော်တင်ဟမ်နည်းပြဟောင်း ပိုချက်တီဟာ ပေါင် ၇.၅ သန်းသာ...
တော့တင်ဟမ်နည်းပြဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် ယူနိုက်တက်အကြီးအကဲထံမှ ဂုဏ်ပြု မက်ဆေ့ချ်လက်ခံရရှိခဲ့သည့် မော်ရင်ဟို
စပါးစ်အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်ဖြစ်လာခဲ့သူ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးမားတဲ့နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပုံရိပ်ကောင်းတွေရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ ကိုင်တွယ်ဖူးတဲ့အသင်းတိုင်းကို အနည်းဆုံး ဖလား ၁ လုံးရအောင် ရယူပေးနိုင်သည့်အရည်အချင်းများပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် စပါယ်ရှယ်ဝမ်းလို့ နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းနည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အကြီးအကဲ ဝုဒ်ဝက်ဒ်က “Congratulations” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပြုမက်ဆေ့ချ်ပို့ပြီး ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို မော်ရင်ဟိုနည်းပြခဲ့စဉ်က ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို မရယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယူရိုပါလိဂ်ဖလား ၊ EFL ဖလား နှင့် ကွန်မြူ နတီဒိုင်းတို့ကိုဆွတ်ခူးပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့ သော် ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ရလဒ်များဆိုးရွားနေပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အိုးထရက်ဖို့ဒ်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက် နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရပေမယ့် မော်ရင်ဟိုဟာ အသင်းဟောင်းအပေါ်မှာ သံယောဇဉ်ရှိပြီး သူလိုသမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ဝုဒ်ဝက်ဒ်ကို ကောင်းကောင်းချီးကျူ းသွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ဆီကို အရင်အသင်းဟောင်းက...
ဆာလတ်ချ် နဲ့ ဒီဘရိုင်းတို့ ချယ်လ်ဆီးမှာ ဘာကြောင့် အောင်မြင်မှုမရခဲ့လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့သည့် ဂျွန်တယ်ရီ
လီဗာပူးလ် နှင့် မန်စီးတီးအသင်းတို့တွင် ခြေစွမ်းပြပြီး ကမ္ဘာ့အဆင်မှီကစားသမားများဖြစ်လာခဲ့ကြသည့် မိုဟာမက်ဆာလတ်ချ် နှင့် ကီဗင်ဒီဘရိုင်းတို့ဟာ တချိန်က ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး လောက်လောက်လားလားအောင်မြင်မှုမရရှိပဲ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကို ကျောခိုင်းစွန့်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆာလတ်ချ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် ဖီအိုရင်တီးနား နှင့် ရိုးမားအသင်းတို့တွင် အဌားသွားရောက်ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ မှာတော့ ရိုးမားအသင်းကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။ ထို့နည်းတူစွာ ကီဗင်ဒီဘရိုင်းဟာလည်း ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ အမည်ခံကစားခဲပေမယ့် အဆိုပါ နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ ဂျာမန်ကလပ်များဆီ အဌားဖြင့်သွားရောက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဒီကစားသမား (၂) ဦးစလုံးဟာ သက်ဆိုင်ရာကလပ်အသီးသီးမှာ ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ တကျော့ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် မော်ရင်ဟို ဆာလတ်ချ် နှင့် ဒီဘရိုင်းတို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကို...
ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကစားသမားတွေကို သတိပေးစကားဆိုသွားခဲ့သည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးရက်ရှ်ဖို့ဒ်
လတ်တလောမှ ဂိုးပေါက်တွေ့နေပြီး ခြေမှန်နေသည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း၏ တိုက်စစ်မှူးမားကပ်စ်ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုကို ရရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကစားသမားများအနေဖြင့် သတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြုံ းဝါးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲများတွင်လည်း ဂိုးများသွင်းယူခဲ့သလို၊ နောက်ဆုံးကစားခဲ့သည့် ကလပ်အသင်းနှင့် နိုင်ငံအသင်း (၁၀) ပွဲမှာ (၉) ဂိုးလောက်ထိသွင်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်သည့်အတွက် ပျော်ရွှင်နေသည့်အပြင် ဒီထက်ပိုပြီအသက်ကြီးလာခဲ့ပါက ပိုကောင်းလာမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ရက်ရှ်ဖို့ဒ်က ဖွင်ဟခဲ့ပါတယ်။ “အခုလက်ရှိ အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချပြီးတော့ အနာဂတ်မှာ ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇ လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ဘောလုံးကို ကစားနေမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သိနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်လည်း အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေကို စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အတက်နိုင်ဆုံး တိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ ESPN...
Big modifications in 2019-16 for that Common Application
Expository essay writing isn’t difficult whenever you have the thoughts and abilities. Documents are an excellent way of improvingachild’s writing and reading abilities. These posts should serve readers. In the most reliable article writing providers. It definitely is founded on the author’s pick. Pupils may have the ability to learn from such authors by observing their function.